Reproduction divisions of rhizome | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Reproduction divisions of rhizome
Rantsana mahasoa ny radiés, ary ny fomba ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Ny radiosy dia iray amin'ireo legioma mahazatra, mahasoa sy mahasalama ao amin'ny latabay. Na izany aza, vitsy ny olona mahafantatra ny haben'ny tombontsoa mety sy ny fahafahana mampiasa ny zavamaniry amin'ny fiainana. Amin'ity fitaovana ity dia hiezaka isika handinika ny tombony rehetra. Radika: fitambarana hafakely Ka nahoana, nahoana no ilaina ny radish? Misy vitaminina PP, vondrona B, ary vitamin C.
Ahoana no hikarakarana spathiphyllum, fitsipika mba hampitomboana voninkazo ao an-trano
Fambolena mitovitovy amin'ny felam-boninkazo fotsy sy ravinkazo maitso - Spathiphyllum, antsoina hoe voninkazo ny fahasambarana vehivavy. Voninkazo mahafinaritra ny mampiseho ny spathiphyllum voninkazo mahitsin-dambany tsara sy voaomana tsara ho an'ireo tia zavamaniry any an-trano. Na dia tsy dia misy dikany loatra aza ity zavamaniry ity, dia mitaky fikarakarana manokana izy io, ary tsy hijery tsara loatra izany.
Callas: ny tsiambaratelon'ny fambolena ao an-trano
Calla dia zavamaniry iray isan-taona ao amin'ny fianakaviana ariozy. Calla dia voninkazo malaza indraindray ary manana endrika miavaka. Ny voninkazo an-trano antsoina hoe Calla dia afaka manana fialan-tsasatra maro, izay mahatonga azy io ho malaza eo amin'ny zaridaina. Tsara ny fepetra ilaina ho an'ny antso an-tariby. Na dia teo aza ireo antsointsika avy any atsimo atsinanan'i Afrika, hita any amin'ny faritry ny haisoratra, dia zavamaniry tsy misy dikany sy tsy mahazatra.
Ireo toro-hevitra lehibe momba ny fikarakarana sy ny fambolena Brunners
Ny mpamboly dia mankasitraka ny zavamaniry satria ny ravinkazo misy raviny manjelanjelatra dia mipoitra mialoha ao amin'ny zaridaina, ary ny voninkazo manga kely dia anisan'ireo voalohany mampifaly ny maso ao anaty voninkazo. Manana fofona mahafinaritra izy ireo, izay manam-potoana hisakanana ny ririnina lava. Ankoatr'izany, Brunner dia tsy dia mendri-piderana eo amin'ny fikarakarana, ary ny karazana dia azo sokajiana mifanaraka amin'ny vahaolana amin'ny vahaolana amin'ny vahaolana.
Kanna: ahoana no hikarakarana sy hanorenana voninkazo
Rehefa mahita izany maharitra taona maro izany, ny florist rehetra dia maniry ny hamindra azy any amin'ny zaridainany. Tsy mahagaga raha mahasarika maso ny ravin-kavoana sy ny voninkazo mamy. Manohitra ny fiavian'ny zavamaniry hafa, toa toa goavana izy ireo, satria amin'ny toe-javatra mahafa-po dia mizotra roa metatra sy sasany. Eny, ary tsy dia miezaka ny mikarakara.
Lakonos: ny tsiambaratelon'ny fampiroboroboana "vahiny Amerikana"
Lakonos dia toeram-ponenan'ny fianakaviana Laconosa (anarana latinina Fitolacca). Ny karazan'ity zavamaniry ity dia manana karazan-javamaniry maherin'ny 35 (liana, herbe, hazo). Ao amin'ny latitudes, dia lakana Amerikana mahazatra. Manana boribory matevina izy ary biriky mihozongozona. Ny ravina dia boribory na ovate, hatramin'ny 20 cm ny lava ary 6 cm ny sakany.
Mpamorona CO2 ho an'ny trano fonenana sy fomba hafa handaminana ny photosynthesis ny zavamaniry
Fitomboan'ny manga sy marefo
Irises. Fambolena sy fiompiana fitsaboana
Fofona maotina ho an'ny sakafo sy fikarakarana radianao voasesika miaraka amin'ny laisoa, anisan'izany ny daikon amin'ny koreana
Zavona rongony Hermelin: Zava-manahirana
Tomaty "Ilya Muromets": ny toetra sy ny famaritana ny karazany
Biby lehibe sy matsiro "Maxim": ireo endri-javatra sy fitsipi-pamokarana mitombo
Mamboly hyacinths amin'ny toeram-ponenana ao anaty trano ary mikarakara azy ireo
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Reproduction divisions of rhizome